हामीले धेरै पटक राम्रा कुरा भन्यौं, तर व्यवहारमा लागू भएनन् : राम कार्की [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ बिहीबार, पुस २२, २०७८, २०:०१
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आठ दिनसम्म चलेर सकियो। प्रज्ञा भवनमा आयोजित महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि बहस र छलफल भए पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता भने पाउन सकेन। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले वाचन गरेको अपूर्ण केन्द्रीय समिति अनुमोदन भयो। अध्यक्षबाहेकका अन्य पदाधिकारी भने अझै अन्योलकै विषय छ। महाधिवेशनमा उठेका सवाल, त्यसलाई नेतृत्वले गर्ने सम्बोधन र माओवादीले लिने आगामी गन्तव्यका विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन भर्खरै सकिएको छ। तपाईंको समीक्षा कस्तो छ?
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा धेरै समयदेखि बहस र छलफल चलिरहेको थिएन। खासगरी एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि पार्टी जीवन कोमामा पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले ती पार्टीलाई ब्युँताइदिएपछि हामीले गतिविधि बढायौँ। त्यस हिसाबमा माओवादीमा धेरै गति आएको मान्न सकिन्छ। महाधिवेशनमा देशैभरका नेता तथा कार्यकर्ता जम्मा भएर राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि बहस र छलफल गर्‍यौँ। आज जसरी कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा छ, दिशाहीन अवस्थामा छ, त्यस हिसाबमा हेर्दा हाम्रा बहसमा अझै अपूर्णता र कमीहरु छन्। तर, अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि विशेष महाधिवेशन गरेर वैचारिक बहस गर्ने भन्नुभएको छ। त्यहाँ विचारलाई केन्द्रमा राखेर बहस र छलफल गर्ने भनिएको छ।
अध्यक्षले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदा हामीले व्यक्त गरेका विचारहरुलाई कति स्थान दिनुहुन्छ? प्रतीक्षाको विषय छ। मैले संक्षिप्तमा भए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँगै अब जाने बाटो कुन हो भन्ने विषय उठाएँ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षाका विषय उठाएँ। त्यसलाई पार्टीले कसरी लिन्छ? अहिले कमसेकम माओवादीले जितेका स्थानीय तहहरुमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याएर लागू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले उठाएको छु। यस्तै संघमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदा त्यो कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्छ।
अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले विचारका विषयमा छलफल नगरेको स्थितिमा माओवादीले थोरै भए पनि गर्‍यो। त्यसैले अन्य राजनीतिक दलहरुमध्ये अब्बल देखिएका छौँ।
मैले नयाँ विचारको सन्दर्भमा माओले भन्ने गरेको कुरा 'क्वोट' गर्ने गरेको छु। लाखौं जनताका बीचमा जब विषयवस्तुहरु लगिन्छ, त्यहाँ छलफल र बहस हुन्छ। त्यहाँबाट आउने उपाय, तरिका र सूचनाहरुलाई संश्लेषण गरेपछि नयाँ कुरा अर्थात् नयाँ विचार आउँछ। कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनमा मस्यौदा वा दस्तावेज तलसम्म पठाइन्छ। केन्द्रीय समितिमा अर्को मत आयो भने त्यसलाई पनि पठाइन्छ। यसरी दस्तावेजहरु तल जान्छन्। त्यस विषयमा बहस र छलफल हुन्छ। दस्तावेजलाई केन्द्रमा राखेर तल सम्मेलन हुन्छन्। त्यहाँबाट चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरुबाट महाधिवेशन हुन्छ। अहिले पार्टीको दस्तावेज छलफल भएर तलबाट आएको होइन।
अरु पार्टीहरुले महाधिवेशनमा वैचारिक बहस र छलफल नगरेको हुनाले हामी फरक देखियौँ। अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले विचारका विषयमा छलफल नगरेको स्थितिमा माओवादीले थोरै भए पनि गर्‍यो। त्यसैले अन्य राजनीतिक दलहरुमध्ये अब्बल देखिएका छौँ। तर, माओवादीको माओवादीसँगै तुलना गर्दा भने अझै पनि पर्याप्त भएन भन्ने लाग्छ।
माओवादीको आठौं महाधिवेशनबाट क्रान्तिकारी विचार र क्रान्तिकारी पार्टी बनाउँदै समाजवादको यात्रा तय गर्ने भनिएको थियो। त्यो दिशातिर पार्टी सोझिएको आभाष भयो कि भएन?
त्यो व्यवहारबाट पुष्टि हुने कुरा हो। अब पार्टीमा कसरी कार्यविभाजन हुन्छ? कसरी पदाधिकारीहरुको चयन हुन्छ? महाधिवेशनमा आएका विचारहरु कसरी व्यवहारिक रुपमा लागू गरिन्छ? त्यो हेर्नुपर्छ। हामीले धेरै पटक राम्रा कुरा भनेका छौँ। तर, व्यवहारमा लागू नभएर यस्तो हालत भएको हो। अहिले पनि भनिँदै छ। माओवादीले कुरा त उठायो। के माओवादीले यस्ता विषय लागू गर्छ त? भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ। माओवादीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक सुरक्षाका विषयमा हेरफेर गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य प्रश्न हो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु पहिल्याएर समाधान दिन सक्नुपर्‍यो। तब मात्र कृषिमा भइरहेको आयात विस्थापित हुने स्थितिमा पुग्छ। यी सबै विषयहरु व्यवहारबाट पुष्टि हुनेगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईं लगायत केही नेताले ल्याएको पूरक प्रतिवेदनमा अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभयो कि भएन?
अध्यक्षले हामीहरुले उठाएका विषयहरु कथनीमा सम्बोधन गर्नुभएको छ। तर, करणीमा अध्यक्ष आफैंले उठाएका विषय पनि लागू हुन्छ कि हुन्न, हेर्नुपर्ने छ। हामीले उठाएका विषय सम्बोधन हुँदैन भनेर आशंकाहरु उठेका छन्। त्यस विषयमा सम्बोधन गरेर अध्यक्षले गलत सावित गरिदिनुपर्ने हुन्छ। पार्टीमा जिम्मेवारी दिँदा राम्रो संगठक, राम्रो विचारकहरुलाई कसरी समेट्नुहुन्छ? भौगालिक, जाति, क्षेत्र, लिंगलगायत युवाहरुलाई कसरी पदाधिकारीमा समेट्नुहुन्छ? त्यसमा पनि धेरै कुरा भरपर्छ।
माओवादी आफ्नै संगठनको जगमा उभिन सक्दैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसलाई गलत सावित गर्न महाधिवेशनले केही छिनोफानो गर्‍यो?
माओवादीले नेपालको राजनीतिमा ल्याएका केही मुद्दाहरु छन्। ती अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा छन्। संघीय गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक जस्ता अजेण्डाको कर्णधार माओवादी हो। अरु इष्टमित्रले अरु अरु कुरा जुटाइदिन सक्छन्। तर, माओवादीले उठाएको मुद्दा अरु कसैले पूरा गर्दैनन्। त्यसलाई आत्मसात गरेर जनतालाई अभाष हुनेगरी काम गर्न माओवादी आफैं जुट्नुपर्ने छ।
आज स्वदेश फर्कँदै माओवादी नेता पुन
आज स्वदेश फर्कँदै माओवादी नेता पुन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आज (सोमबार) स्वदेश फर्कने भएका छन्। गत असोजमा उपचारका लागि थाइल्यान्ड गएका उनी थप उपचारका ल... सोमबार, माघ १०, २०७८
उपेन्द्र यादव भन्छन्– बाबुरामजीहरुले के गर्न खोजेको हो, अब बैठकमै कुरा गर्छौं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीभित्र देखिएका समस्याका विषयमा बैठक बोलाएर छलफल गर्ने बताएका छन्। जसपालाई... आइतबार, माघ ९, २०७८
दलहरूको दायरा खुच्याउने निर्वाचन आयोगको कसरत! दलहरुले विधानमा लेखेका जुन शब्दहरुप्रति अहिले आयोगले प्रश्न उठाइरहेको छ, ती नयाँ शब्द होइनन्। दलहरुले आफ्ना दस्तावेजहरुमा ती शब्द ले... आइतबार, माघ ९, २०७८
बायर्न म्युनिखको सहज जित सोमबार, माघ १०, २०७८